Isiraphu ye licorice impande isetshenziswa abantu imithi kuze kuphele amakhulu eminyaka. yokusetshenziswa kwawo kabanzi kungenxa izakhiwo esiyingqayizivele of izinto zokusetshenziswa: iliquorice, noma njengoba ibizwa, licorice iqukethe tannins, flavonoid, saponins. Kusukela izimpande imbiza zisetshenziswa wenza webele elixir ukwelapha ukukhwehlela. I izinto eziqukethwe bayingxenye neminye imithi "Flakarbina", yokwamukela okuyinto kuboniswe peptic isilonda isifo; anti-inflammatory futhi antispasmodic "Likviriton" izidakamizwa; "Glycyram" Kunconywa dermatitis, eczema kanye somoya. Futhi, izinto ezikhishwe liquid owomileyo ube yiziphethu iliquorice kunezelwa izidakamizwa eziningi, ngoba ukunambitheka sweet. Licorice ibuye isetshenziswe sweetening ezihlukahlukene iziphuzo kanye confectionery.
Syrup iliquorice - ngempumelelo expectorant ejenti. Ngaphezu kwalokho akhiphe obukhulu eyatholakala kusukela izimpande luthuli, ke yakhiwa adjuvants: amanzi ETHYL utshwala. Kuyinto uketshezi onsundu viscous, ngezinye izikhathi ne ziyazika roll kabani ukulungiselela akaphelelwa impahla yayo. Syrup iliquorice icacisa Ukukhetha nolwelwesi lwamafinyila we elingenhla zokuphefumula ipheshana uketshezi, ngaphezu, eqeda ukuvuvukala, umphumela spasmolytic. Iqukethe flavonoid kukhona Antioxidants enamandla.
Syrup iliquorice, kanye nezinye izidakamizwa esetshenziswa ukwelapha izifo zokuphefumula: i-pneumonia, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, tracheobronchitis, bronchiectasis, kulandele ukukhwehlela enobudlova futhi basebenzile expectoration uketshezi. Take it 3-4 izikhathi ngosuku ngemva kokudla, njalo ukuphuza uketshezi oluningi. Single izinga: abadala izingane ezineminyaka engu-12 ubudala ukuthola 15 ml. Course isikhathi kunqunywa udokotela kuncike izici isifo kanye izuzwe nomphumela oqabulayo. Ngezinye izikhathi ungase uthole ulwazi indlela isiraphu ye licorice impande ivunyelwe ukuze isetshenziswe ekwelapheni izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, ngisho unyaka owodwa ubudala. Ngakho umthamo owodwa we-engayitholi kufanele kube, kuye ngokuthi engu-ke umntwana, esuka ½ awuhhafu isipuni dessert nezinkezo. Nokho, nodokotela bezingane eziningi ziyavumelana ukuthi ukunikeza izingane isiraphu utshwala equkethe ka licorice impande, okungenani, ezingahlakaniphile.
Ngesizathu esifanayo it is hhayi Kunconywa ukuba uthole ngemuva kwesondo ngenkathi ethatha licorice isiraphu. Akufanele aphuze, futhi abesifazane abakhulelwe - kodwa hhayi kuphela ngenxa base utshwala, okuyinto kungalimaza i-fetus. Ukuthatha iliquorice ngesikhathi sokukhulelwa, owesifazane kwephula esele hormone nomzimba, njengoba lokhu kusho ukwenyuka ezingeni estrogen. Ngesikhathi ethola isiraphu Kufanele umise ibele.
Syrup iliquorice, ogama Ukwakheka kuchazwa ngokuningiliziwe e Iincwajana abanesifo sikashukela contraindicated ngenxa ushukela equkethwe kuwo. Akumele iqondiswa ukukhuluphala, umfutho ophezulu wegazi kanye izifo ephelezelwa imisebenzi kwezinso nesibindi. Umuthi is contraindicated ku hypokalemia. Ezinye iziguli zingenza ukuzwela umuntu ukuba izithako isiraphu - kulesi simo, kufanele ayisekho.
Ngokuqondene nokuxhumana nezinye izidakamizwa, le iliquorice isiraphu engathandeki iqondiswa kanyekanye ne isisu eziningi (okubizwa ngokuthi i-loop bese isisu thiazide), laxatives futhi adrenocorticosteroids. Lo mthetho owenqabela is nje isuke ibangelwa yokuthi kuleli cala i- ibhalansi electrolyte emzimbeni. Libuye efiselekayo ukugwema kanyekanye reception isiraphu iliquorice nezidakamizwa inhliziyo ezithile (isib quinidine), njengoba inhlanganisela ithuthukisa hypokalemia yabo. Uma lokhu kungeke kwenzeke, khona-ke okungenani, akufanele bathathe lezi izidakamizwa ndawonye isikhathi eside (ngaphezu kuka-2 amaviki). Naphezu kweqiniso lokuthi lo isiraphu ye licorice impande iyatholakala ngaphandle kadokotela, ngaphambi ukulaliswa esibhedlela yakhe kufanele kudokotela.
Uyini uketshezi imishini?
"NasePheresiya" sine: izibuyekezo zakho, izincomo lomshado, Izimo
Yokupaka egcekeni - izakhamuzi ikhanda